चितवनमा घाँस का’ट्न गएका महत्तोको बाघले खाएको अवस्थामा हा’डखो’र फेला ! - Onlines Time
August 15, 2021 onlinestimeLeaveaComment on चितवनमा घाँस का’ट्न गएका महत्तोको बाघले खाएको अवस्थामा हा’डखो’र फेला !
चितवन । कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएका खैरहनी नगरपालिका–१३ हर्नरी निवासी अन्दाजी ६५ वर्षीय भदै महत्तोको बाघले खा एको अवस्थामा हा डखो र फेला परेको छ । कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वनको इचर्नी पोस्ट नजिकै रहेको कंक्रिट टावर नजिकै महत्तोको हा डखो र भेटिएको हो ।
महत्तो यही साउन २५ गते नजिकै रहेको कुमरोज सामुदायिक वनमा घाँस का ट्न भनी घरबाट निस्किएका थिए । सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएका महत्तो बेलुकासम्म घर नफर्केपछि परिवारले नजिकै रहेको कुमरोज सामुदायिक वनमा खबर गरेका थिए ।
खोजी गर्ने क्रममा शुक्रबार महत्तोले लगाएको चप्पल र टोपी भेटिएको थियो भने आज (शनिवार) उनले लगाएको क ट्टु च्या ति एको अवस्थामा फेला परेको कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वनका अध्यक्ष गणेश कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
श्रेष्ठले कपडाको साथमा मा न व शरीरका हा डका टु क्रा पनि फेला परेको बताए । उनले कपडाको आधारमा परिवारको सदस्यद्वारा पहिचान भएको र भेटिएको हा डखो र महत्तोकोनै भएको जानकारी दिए ।
मलेसिया जानेहरुलाई तीन साता क्वारेण्टिन र पिसिआर परीक्षण अनिवार्य (जानकारीका लागि सेयर गराै)